Chenguang ဇီဝဗေဒဌာနသို့ Xinhua သတင်းဌာနသတင်းထောက်
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါ - +8615600247717
Xinhua သတင်းအေဂျင်စီသတင်းထောက် Chenguang ဇီဝဗေဒ
ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည့်အချိန်တွင်ကွူးကျူးသည်အလွန်အေးခဲ့သည်။ ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် Xinhua သတင်းအေဂျင်စီ၏ Hebei ဌာနခွဲ၏အမှုဆောင်လက်ထောက်အကြီးအကဲအယ်ဒီတာ Chen Zhonghua၊ စီးပွားရေးရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး ၀ မ်မင်း၊ Yan Qilei၊ စီးပွားရေးရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာနလက်ထောက်ဒါရိုက်တာနှင့်အခြားလူငါး ဦး အထူးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Hebei ၏“ လုပ်ငန်းပေါင်းတစ်သောင်းအသွင်ပြောင်း” ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Lu Qingguo နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် Shijiazhuang မှ Chenguang ဇီဝဗေဒသို့ခရီး။
Chenguang ဇီဝအုပ်စုကုမ္ပဏီ၏စတုတ္ထမြောက်ကွန်ဖရင့်ခန်း၌ the ည့်သည်များနှင့် guests ည့်သည်များသည်ထိုင်ခုံကိုယူကြသည်။ Chenguang ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ပြီးနောက် Chen Zhonghua သည်သူ၏လျစ်လျူရှုသောမျက်နှာပေါ်တွင်ပြုံးသည်။ Lu Qingguo နှင့်အတူ Chen Zhonghua သည်ပြပွဲခန်းမသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Lu Qingguo သည်အထွေထွေအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသင်တန်း၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်ကြမ်းများအခြေစိုက်စခန်းများဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် Chenguang ဇီဝဗေဒလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Lu Qingguo က Chenguang ဇီဝဗေဒသည်ကုမ္ပဏီ၏အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်“ အပိုတာယာ” ပြုလုပ်ရန်ဇမ်ဘီယာရှိမြေlandက ၁၀၀၀၀၀ ကျော်အားကုန်ကြမ်းအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ဝယ်ယူကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးသည့်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲဖြန့်ချိမှုမတိုင်မီက Chen Zhonghua ကထပ်ခါတလဲလဲချီးမွမ်းခဲ့သည် ! မင်းမှာကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိတယ်။ သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်၊ နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အခြားမည်သူမျှသင်နှင့်လိုက်မီနိုင်မည်မဟုတ်။ အာဖရိကတွင်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများတည်ဆောက်ခြင်းသည်မိုးရာသီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်အတွက်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးပုံစံကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ”
“ ယခုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်များကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ကုန်ကြမ်းအဖြစ် (ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ) အဖြစ်ရောင်းချသည်။ ထို့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆေးတောင့်များထဲသို့ထုပ်ပိုးပြီးတရုတ်သို့ရောင်းချသည်။ သူတို့ကိုယွမ်တစ်ရာနဲ့ရောင်းပြီးအမေရိကန်ကနေယွမ် ၁၀၀ ပြန်ရောင်းတယ်။ ငါတို့အရှုံးပေးနိုင်တယ်လို့မင်းထင်သလား။ Lu Qingguo ကဆက်လက်ပြောကြားသည်မှာ -“ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များနှင့်တရုတ်ရိုးရာဆေးဝါးများ၏ခေတ်သစ်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကြီးသို့ချီတက်ကြစို့။ သာမန်လူများစားသုံးနိုင်စေရန်၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းသောနှင့်စျေးပေါသည်။ " Chen Zhonghua ကထိုစကားလုံးများကိုယူပြီး“ ဒီနည်းအားဖြင့်ငါတို့ပြည်ပကိုပြန်သုံးစရာမလိုဘူး!”
သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည် Chenguang ဇီဝအတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာများအတွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ လာမယ့် ၁၀ နှစ် (၂၀) ​​အတွင်းမှာလူတွေရဲ့စားသုံးမှုနှုန်းကမြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာကိုလည်းတိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုသူတို့ပိုမိုနားလည်လာလိမ့်မယ်။ ထိုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပိုမိုကြီးမားပြီးပိုမိုအားကောင်းလာသည်မှာသဘာဝပင်ဖြစ်သည်။
Lu Qingguo သည်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကိုသတင်းထောက်များအားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းကသတင်းထောက်များကိုလတ်ဆတ်လတ်ဆတ်စေခဲ့သည်။ Chen Zhonghua က“ စာရေးကိရိယာထုတ်လုပ်သူလို့ငါထင်တယ်” ဟုပြောသည်။ Lu Qingguo က“ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နှစ်ဆယ်ကဟာ့ဒ်ဝဲတွေထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ” နံရံပေါ်ရှိ“ အမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနည်းပညာစင်တာ” ၏ပြားကိုညွှန်ပြကာသူက“ ကျွန်တော်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနည်းပညာစင်တာ ၁၀၀၀ ကျော်မှာထူးချွန်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီး ZTE အပါအ ၀ င်ထူးချွန်သူအမြောက်အမြားသာရှိပါတယ်။ ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီနှင့်ခရိုင်အစိုးရ၏အစည်းအဝေးများကိုမကြာခဏကျင်းပလေ့ရှိသော etc Yan Qilei ကလူး Qingguo သို့ပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Xu Qin ကလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ Chenguang ကိုမင်းအတွက်ကြော်ငြာခဲ့တာပါ။ အစည်းအဝေးသည်မည်မျှပင်သေးငယ်ပါစေသူက“ အိုး! ထိုကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေးကောင်တီ Quzhou တွင်မမြင်ရသောချန်ပီယံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မမျှော်လင့်ပါ။
post အချိန်: ဇန်နဝါရီ -15-2021
Chenguang Biotech Group Co. , Ltd.